श्री श्रृष्णमा भिष्म पितामह बनेका चर्चित कलाकार सुनीललाई दुई छाक खान कठिन, रुँदैभने: ‘मलाई परिवारले पनि छोडे, अब म कसरी गुजारा गरुँ ? -
Homeसमाचारश्री श्रृष्णमा भिष्म पितामह बनेका चर्चित कलाकार सुनीललाई दुई छाक खान कठिन, रुँदैभने: ‘मलाई परिवारले पनि छोडे, अब म कसरी गुजारा गरुँ ?
श्री श्रृष्णमा भिष्म पितामह बनेका चर्चित कलाकार सुनीललाई दुई छाक खान कठिन, रुँदैभने: ‘मलाई परिवारले पनि छोडे, अब म कसरी गुजारा गरुँ ?
April 29, 2021 admin समाचार 537
श्री कृष्णमा भीष्म पितामहको भू’मिका निभाउने अभिनेता सुनील नागर यस महामारीको का’रण कठिन अवस्थामा गुज्रि’रहेका छन। महामारीमा काम नपाएर उनको हालत विग्रिएको छ । उनलाई आर्थिक संकट परेको छ । उनीसंग भएको ब’चत पनि सकियो ।
आफ्नो अवस्था र व्यक्तिगत अशा’न्तिका कारण उनले ओशिवरा, मुम्बईमा रहेको आफ्नो घर पनि बेच्नुपर्‍यो। उनी हाल भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । एक अन्तर्वा’र्तामा, उनले भने यो सबै जिम्मेवारीको दो ष कसलाई दिउँ मलाई थाहा छैन । मैले काम गरेको बेला धेरै कमाएँ। मैले धेरै हिट का’र्यक्रम गरे र धेरै फिल्महरूमा काम गरें।
मानिस’हरूलाई मेरो काम मन पर्यो र मैले बढि काम पाएँ। तर आज, ईन्डस्ट्रीमा पनि, हामीमध्ये अधिकांश उत्तम व्यक्तिह’रूका लागि कुनै काम छैन। ु ुम प्रशिक्षित गायक पनि हुँ। त्यसैले केही दिन अघि मलाई एउटा रेस्टु’रेन्टमा गाउने प्रस्ताव आयो, जहाँ उनी’हरूले मेरो दैनिक कामकाजको निकै प्रशंसा पनि गरेका थिए । राम्रै भइरहेको थियो तर तर त्यसपछि लक’डाउन घोषणा गरियो र त्यो रेस्टुरेन्ट बन्द भयो। म पछिल्लो केही महिनादेखि मेरो कोठा भाँडा पनि तिर्न अ’समर्थ छु।
मानिसह’रूलाई कसरी सुनीलको आर्थिक अवस्था यस्तो भयो होला भन्लान् । उनले आफ्नो न’जिकको साथीलाई आफ्नो यस्तो अवस्थाका बारेमा बताएका थिए । उनी जुन कास्टिंग निर्देशक हुन्। उनले यो कुरालाई सार्व’जनिक गर्ने निर्णय गरिदिए । यस बारेमा, उनले भने ‘उनले मलाई विश्वास दिलाए कि यो काम माग्ने सबै’भन्दा राम्रो तरिका हो ।
एक जना निर्देश’कले मलाई सम्पर्क गरे, मैले उनलाई भने म एक भयानक वित्तीय संकटबाट गु’ज्रिरहेको छु। उनीहरूले मलाई मद्दत गर्न पनि सोधे, तर कति लामो हुन्छ थाहा छैन। मैले तिनीहरूलाई एक ईमेल पनि लेखेको छु। म यो भाडाको घरमा पूर्ण रूपमा एक्लो छु। पछिल्लो डेढ बर्ष’मा, मेरो सबै बचत प्र’योग भएको छ।
सुनी’ल ताल, चतुर सिंहदेखि स्टार, यू आर माय लाइफ जस्ता फिल्महरूको लागि परि’चित छन्। उनले धेरै टिभी श्रृंखलाहरूमा पनि काम गरिसकेका छन्। ऊ उनले श्री कृष्ण, ओम नमः शिवय, श्री गणेश र कुबूल है जस्ता धारावाहिकहरूमा म’हत्वपूर्ण पात्रहरू बनेर खेले।
उनले भने यति धेरै फि’ल्ममा काम गरेको मानिस कसरी काम विहिन हुनसक्छ ? भन्ने लाग्छ होला तर यो मेरो जीव’नको सत्य हो। केही समय पहिले मैले ब्यव’सायमा ठूलो घाटा बेहोुर्न परेको थियो । मैले आफ्नो पैसा पनि त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्‍यो। मेरो प’रिवारले मलाई त्यागे । मैले मेरो छोरा’लाई राम्रो शिक्षा दिएँ उनीहरुलाई राम्रो विद्यालयमा पढाए । मेरा दाजुभाइहरू पनि छन्, तर कसैलाई मेरो वा’स्ता छैन। इताजाखबर बाट
अनौठो प्रतिभा भएकी दिप्ती, जस्ले आँखा चि’म्लेर पत्ता लगाउन सक्छिन् रंग र छामेरै पढ्न सक्छिन् (हे’र्नुहोस् भिडियो)
एकै परिवारका ७ जना कोरोना सं’क्रमित, १ को मृ’त्यु
युटुबमा भाइरल भएका अलिफ खानको प्रतिक्षित गीत ‘छुँदिन म जाले रुमाल’ सार्वजनिक(भिडियो हे’र्नुहोस)
February 15, 2021 admin समाचार 2210
गायक अलिफ खा’नको ‘छुँदिन म जाले रुमाल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । डिभाइन म्युजी’कको प्रस्तुती रहेको उक्त गीतमा खा’नको स्वर सहित अभिनय पनि रहेको छ । बिशेषगरी मुस्लिम समुदायका खान आफू मुस्लिम भएकै कार’ण
February 1, 2021 admin समाचार 2244
नेपाली ब’जारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५०० रूपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका छा’पावाल सुन प्र’तितोला ९२ हजार ६०० रूपैयाँ कायम भएको छ । तेजाबी सुनको
जापान लान्छु भन्दै लाखौ अ’सुल्ने कमला पक्राउ, पत्रकार माथी पटकपटक हा’तपात (भिडियो सहित)
March 16, 2021 admin समाचार 2114
नेपालमा रोज’गारीको राम्रो अवसर नपाएका हजारौ नेपालीहरुको गन्तब्य हो बैदेशिक रोजगार ।देशमा भने जस्तो जा’गिर नपाए पछि बिदेशिन बा’ध्य छन् हजारौ नेपाली । बैदेशिक रोजगारको नाममा ठ’गि गर्ने र झु’क्काउने शृंखला नया भने हैन ।जापान
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (175245)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168962)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168749)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168373)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (167368)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166147)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165593)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (164071)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158663)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145542)